2 Thessalonians Myanmar Audio Bible Myanmar Bible .Net
ခ​ရစ်​တော်​တစ်​ဖန်​ကြွ​လာ​တော်​မူ​ခြင်း​နှင့်​ပတ် သက်​၍ သက်​သာ​လော​နိတ်​အ​သင်း​တော်​တွင်​မ တည်​မ​ငြိမ်​မှု​ရှိ​နေ​သေး​၏။ သ​ခင်​ဘု​ရား​ကြွ လာ​တော်​မူ​ရာ​နေ့​ရက်​ကျ​ရောက်​ပြီး​ပြီ​ဟူ သော​ယုံ​ကြည်​ယူ​ဆ​ချက်​မှား​ယွင်း​ကြောင်း ကို​တင်​ပြ​ရန် သက်​သာ​လော​နိတ်​သြ​ဝါ​ဒ​စာ ဒု​တိ​ယ​စောင်​ကို​ရှင်​ပေါ​လု​ရေး​သား​ပေ​သည်။ ခ​ရစ်​တော်​တစ်​ဖန်​ကြွ​လာ​တော်​မ​မူ​မီ​ကိုယ် တော်​ကို​အ​တိုက်​အ​ခံ​ပြု​မည့်“သူ​ယုတ်​မာ ကြီး” ဟု​အ​မည်​တွင်​သူ​၏​ဦး​ဆောင်​မှု​ဖြင့် ဆိုး​ညစ်​ယုတ်​မာ​မှု​များ​သည် အ​ဆိုး​ရွား ဆုံး​အ​ခြေ​အ​နေ​သို့​ရောက်​ရှိ​လာ​ရ​ဦး မည်​ဖြစ်​ကြောင်း​သွန်​သင်​၏။
This isafollow-up to Paul’s first correspondence to the Thessalonian church. Apparently, the church was still confused about the Lord’s second coming. Paul provides additional details regarding the timing of that event (the son of perdition must come first and lead many into deception) and encourages the members of the church not to be idle. (from – https://biblestudyblueprint.com/synopsis-of-bible-books/)